Port Management Association yeEastern neSouthern Africa inowedzera kutenderera kweAfrican Tourism Board
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » nhau » Port Management Association yeEastern neSouthern Africa inowedzera kutenderera kweAfrican Tourism Board
African Tourism Bhodhi • Nhau Nhau • Djibouti Breaking Nhau • Hurumende Nhau • Investments • Kenya Kupwanya Nhau • Mauritius Breaking Nhau • Mozambique Breaking News • Namibia Breaking News • nhau • vanhu • South Africa Breaking News • Sudan Kupwanya Nhau • Tanzania Breaking News • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Uganda Breaking News
Dai 22, 2019
The Port Management Association yeEastern neSouthern Africa (PMAESA) ine nhengo mu9 Africa Nyika dzakabatana neAfrican Tourism Board nhasi. PMAESA ibato risingabatsiri rehurumende rinogara muMombasa, Kenya.
PMAESA inoumbwa nemasangano eHurumende Line, maPort Operators, Logistics nevamwe vanobatana nePort and Shipping vanobva kuEastern, Southern Africa uye Western Indian Ocean Dunhu.
Chinangwa chekutanga cheMAESA ndechekupa chikuva apo vese vanobatika pamusoro uye vatambi vengarava vanosangana nguva nenguva kuchinjana nekugovana mazano azvino muindasitiri.
Andre Ciseau, Secretary-General wesangano akati: "Kupinda kwedu muAfrican Tourism Board kuchapa masangano maviri aya mukana wekutaurirana nekugovana maitiro akanaka nedonzvo rekukudza nekusimudzira kondinendi ye Africa.
African Tourism Board Sachigaro Juergen Steinmetz akadaro. “Port Management Association kujoina African Tourism Board idanho rakakosha kubhodhi rako uye rinovhura musuwo wekuwedzera mukana wedu wekushandira pamwe. "Tinogamuchira PMAESA kuAfrican Tourism Board."
Kenya Ports Chiremera
Pfupiso Kenya Ports Authority (KPA) isangano rehurumende riri pasi pe Ministry of Transport rine basa rekuti "kuchengetedza, kushanda, kugadzirisa nekugadzirisa zviteshi zvengarava zvakarongwa" mumahombekombe eKenya anosanganisira kunyanya Port yeMombasa nemamwe madoko madiki anosanganisira Lamu, Malindi, Kilifi, Mtwapa, Kiunga, Shimoni, Funzi naVanga. Iri zvakare rinoona nezve…Read More
Tanzania Ports Chiremera
MhedzisoTanzania Ports Authority (TPA) parizvino ine Dar es salaam, Tanga, Mtwara Ports uye ese madziva echikepe muTanzania. Tanzania Ports Authority yakavambwa musi wa 15 Kubvumbi 2005 zvichitevera kubviswa kweTHA Mutemo Nha. 12/77 nekugadzwa kweTPA Mutemo Nha. 17/2004. Kumisikidza uye kuronga mashandiro eHarbors. TPA inosungirwa ku:…Read More
Maputo Port Development Kambani
Ongororo yeMaputo Port Development Kambani (Port Maputo) ikambani yakazvimiririra yenyika, zvinobva mukudyidzana pakati peMozambican Railway Company (Caminhos de Ferro de Moçambique), Grindrod neDP World. Musi wa 15 Kubvumbi 2003 Port Maputo yakapihwa mukana wePort Mapu kwenguva gumi nemashanu, pamwe nesarudzo yekuwedzera ye…Read More
Mauritius Ports Chiremera
Ongororo yeMauritius Ports Authority (MPA) yakagadzwa pasi pePorts Act 1998. Chinangwa chikuru cheMPA ndechekungova chete nyika masimba emachiteshi kutonga nekudzora chikamu chechiteshi nekupa masevhisi emumvura. Chief Executive Officer Mr Shekur Suntah Yese Midziyo Inoburitswa 2012: 7,075,186 Tani Yese Midziyo Traffic 2012: 417,467 XNUMX TEUs Port Tariffs…Read More
Ministry of Works uye Kutakura kweRepublic yeUganda
Marongero Ministry of Works and Transport (MoWT) yeRepublic yeUganda inzvimbo yeHurumende yakapihwa mvumo yeku: Kuronga, kuvandudza nekuchengetedza hupfumi, hunyanzvi uye hunyanzvi hwekufambisa; Ronga, gadzira uye chengetedza hupfumi, hunyanzvi uye hunoshanda mabasa ekufambisa nemugwagwa, njanji, mvura, mweya uye pombi; Manage Veruzhinji mabasa anosanganisira zvimiro zvehurumende uye; Kwidziridza tsika dzakanaka…Read More
Namibian Ports Chiremera
Iyo Namibian Ports Authority (Namport), inoshanda seNational Port Authority muNamibia kubvira 1994, inotarisira Chiteshi cheWalvis Bay neChiteshi cheLüderitz. Chiteshi cheWalvis Bay chiri kumahombekombe ekumadokero eAfrica uye chinopa nzira iri nyore uye nekukurumidza kupfuura pakati peSouth Africa, Europe neAmerica….Read More
Pfupiso Port of Djibouti iri pamusuwo wekumaodzanyemba weGungwa Dzvuku, pamharadzano yemigwagwa mikuru yekutakura nyika inobatanidza Asia, Africa neEurope. Chiteshi chengarava kutsauka kushoma kubva munzira huru yekutengeserana yekuEast-West uye inopa nzvimbo yakachengeteka yenharaunda yekudzikisira uye kuendesa zvinhu. Kubva 1998, iyo…Read More
Sea Ports Corporation (SPC) inzvimbo yakazvimirira yenyika yeSudan iyo inotonga, inovaka uye inochengetedza zviteshi, zviteshi zvembare nemwenje yemwenje yeSudan. Iyo kambani yakavambwa mu1974 nehurumende yeSudan kuti ive yenyika port opareta uye chiteshi masimba. SPC inoshanda uye inogadzirisa anotevera madoko eSudan: Port Sudan Al…Read More
Transnet National Ports Chiremera
Ongororo yeTransnet National Ports Authority (TNPA) chikamu cheTransnet Limited uye chakapihwa basa rekutarisira nekutarisira ese manomwe mabhizimusi emahombekombe pamahombekombe eSouth Africa e2954km. Yakamisikidzwa kumucheto kweAfrican Continent, zviteshi zveSouth Africa zvakagadzirirwa kushandira ese mabvi ekumabvazuva nekumadokero. Transnet National Ports…Read More
Yakatangwa mu2018, iyo African Tourism Board musangano unozivikanwa pasi rese nekuita sechinhu chinokurudzira budiriro yekusimudzira mafambiro nekushanya kuenda, kubva kunharaunda yeAfrica.
Kuti uwane rumwe ruzivo uye uve nhengo inoshanya www.africantourismism.com